Ahoana no fomba hitantanana fivoaran'ny Web sy SEO amin'ny fomba tsara indrindra?
Raha te-hividy bebe kokoa momba ny fifamoivoizana organika ny tranokala vohikala amin'ny aterineto ianao, dia tokony handinika ity fifanakalozan-kevitra manaraka ity. Mino aho fa ny fampielezan-kevitra rehetra amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny aterineto dia tokony hiantehitra hatrany amin'ny fampiroboroboana ny tranokalan'ny SEO sy ny SEO, sady mifandray akaiky. Andeha hojerena izany - Ny fikarohana momba ny Search Engine dia misimisy kokoa momba ny fikarohan-teny fototra, miaraka amin'ny tetikady ara-barotra ao amin'ny vondrona. Fa mbola misy lafiny ara-teknika loatra izay matetika no miverina ao ambadiky ny sehatra - commercial real estate appraiser checklist form. Fa indrindra indrindra ireo olana ara-teknika ireo dia mamaritra ny laharan'ny pejy web amin'ny lisitry ny SERPs. Midika izany fa rehefa manao ny SEO ianao, dia tsy maintsy mandinika mandrakariva ny dingan-koditra mety ho an'ny pejy web anao ianao, hatrany am-piandohana.
Mankasitraka ny fanondroana
Ny zavatra voalohany natao ho an'ny tranonkala sy ny SEO dia ny hanome antoka Ny fizarana tsirairay ao amin'ny tranonkalanao dia farafaharatsiny amin'ny fisokajiana, dia midika fa tsy misy na inona na inona hanakanana ireo robots crawling amin'ny "mamaky" ny ampahany amin'ny rakitra rehetra. Raha manao izany aho dia manoro hevitra amin'ny fampiasana "Fetch" baiko ao amin'ny sehatra Crawl ao amin'ny Google Search Console mba hijery ny fijery voalohan'ny tranonkalanao, raha jerena ny motera fikarohana. Misy soso-kevitra iray monja ato - miezaka ny mitazona ny zava-drehetra ao amin'ny format HTML, aza misalasala amin'ny fampiasana Flash na Silverlight ho an'ny pejy Internet misy lanjany lehibe. Raha toa ny zava-drehetra dia toa marina, ary ny tranokalanao dia farafahakeliny mampifandray azy, eo ambany fahitanao hahita toro-hevitra vitsivitsy ho an'ny traikefa mpampiasa kokoa, ary koa ny mety ho laharam-pahamehana mety ho azon'ireo motera fikarohana.
Manana adiresy madio
Ny tranonkala ao amin'ny tranonkalanao dia singa manan-danja amin'ny fampivoarana ny tranonkala sy ny SEO,. Ataovy mora kokoa ny URL-nao mba ho "takatra" amin'ny alalan'ny robots fikarohana, ary koa vakiana amin'ny mpampiasa tena izy. Alefaso ireo antontan-kevitra URL tsy ilaina, izay mety hampisavorovoro na amin'ny Google na ny olona mitsidika ny tranonkala. Amin'ny lafiny iray, raha tsy misy fanamafisana ny URL-nao dia hahatonga ny olona tsy hikendry ny olona, ​​fa tsy hilaza ny azy. Mandritra izany fotoana izany dia mety hiatrika olana saro-bahana ny fitaovam-pitadiavana rehefa "mahatakatra" ny maha-zava-dehibe azy amin'ny teny fototra iray.
Raha jerena ny pejy Internet ary ny fampiroboroboana SEO, dia araho tsara ny URLo manaraka ireto:
Ny URL an'ny pejy dia tokony ho fohy sy fampahafantarana araka izay tratra. Manoro hevitra aho hampiditra ny URL -nao amin'ny adiresy manan-danja sy manan-danja fotsiny, mba hifanaraka amin'ny lohahevitry ny tranonkala.
Tsy voatanisa amin'ny tenimiafina ny URL-nao, tehirizo ny lalana mankany amin'ny fanondroana mazava araka izay azo atao. Ataovy izany, tadidio ny manilika ny teny fanevatevana amin'ny lafy tsarany (toy ny tena matetika: "ny," "ny," "na," "a," sns.)
Always use bindings to separate the sequence of words in your URLs. Adinoy ny fanadihadiana, satria tsy fantatry ny mpamily ny fikarohana. Izany dia miteraka fahasarotana sahaza ho an'ny fisiahana sy ny fanodinana.
Tohizo ny fehezan-teny manan-danja havanana amin'ny fametrahana ny teny fototrao manan-danja indrindra eo am-piandohan'ny URL. Tadidio fa araka ny lojikan'izy ireo, ny botsikao finday dia mametraka lohahevitra lehibe kokoa ho an'ireo izay mety ho lohalaharana amin'ny teny fanombohana.
Any an-dàlana, misy antony iray hafa hitarihana ny URL-nao ho fohy araka izay tratra, i. f. , mitazona sy mampitombo ny lanjan'ny teny fototra ao amin'ny URL. Amin'io fotoana io ihany anefa, dia mamelà ny URL -nareo ho toy ny hoe izy ireo dia ny ampahany fotsiny amin'ny soratanao. Raha manao izany ianao, dia ho voavaha hatramin'ny farafaharatsiny ny votoatiny na adiresy vitsy kely.